करोडपति बन्ने हो ? दिनको जम्मा तीस रुपैयाँ बचत गरे पुग्छ - Sutra News
करोडपति बन्ने रहर कसलाई पो नहोला र ? तर, कसरी बन्ने भन्ने बाटोचाहीँ धेरैले नदेखेका हुन सक्छन् ।
त्यसैले धेरै मान्छेहरु पैसा कमाउने लालचमा नकरात्मक काम गर्न पुग्छन् । र, एकदिन नराम्रोसँग फस्छन् ।
आज हामी तपाईँलाई करोडपति बन्ने सरल उपाय सिकाउँदै छौं ।
यसरी खर्च कटौटी गरी दैनिक ३० रुपैंयामात्र वा महिनाको ९०० रुपैंयाँ मात्र बचत गर्न सक्नु भयो भने पनि तपाईं करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईं अहिले २० बर्षको हुनुहुन्छ र दैनिक ३० रुपैंयाँ बचत गर्नुभयो भने ६० बर्षको उमेरमा तपाई करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ । दैनिक ३० रुपैंयाँको हिसाबले महिनामा ९०० रुपैंयाँ बचत गर्नुस् । यहि ९०० रुपैंयाँ ४० बर्षसम्म जोखिम कम हुने कुनै म्युचल फण्डमा लगानी गर्नुस् । म्युचल फण्डले सामान्यत १२/१३ प्रतिशत रिर्टन दिन्छ । यति गर्नुभयो भने तपाईंको लगानीले गुणात्मक फड्को मार्छ ।
यस्तो अवसर पाको उमेरको मान्छेको लागि पनि उत्तिकै लाभदायक छ । तर बचत भने थोरै बढाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो, ३० बर्षको मानिसले दैनिक ९५ रुपैंयाँ, अर्थात् महिनाको २८ सय ५० रुपैंयाँ बचत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंलाई लगिरहेको होला कि ४० बर्ष भनेको धेरै लामो समय हो । अलि छिटो गर्ने केहि उपाय छ ?
यदि तपाईंको म्युच्युअल फण्ड राम्रो छ र १५ प्रतिशत नाफा दिन्छ भने तपाईं ३५ बर्षमा करोडपति हुन सक्नुहुन्छ । अझ म्युचल फण्डले दिने लाभांस पनि लगानीगर्दै जानुभयो भने अझै छिटो हुनसक्छ ।
हाल नेपालमा ५ देखि ७ बर्षसम्मका म्युचल फण्डहरु छन् । आगामी दिनहरुमा नयाँ म्युच्युअल फण्डहरु आउने क्रम जारी नै रहन्छ ।
यहाँ ब्यवसायिक र अनुभवी मानिसहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेर तपाईंको पैसा लगानी गर्ने हुनाले म्युचुअल फण्डको उदाहरण दिइएको हो । यदि आफैं सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं अझै चाँडै धनी हुन सक्नुहुन्छ । तर, आफैं सेयेर बजार पस्दा जोखिम भने धेरै हुन्छ ।
याद राख्नुहोस्, बारेन बफेट सेयरमा लगानी गरेर विश्वको दोस्रो धनी व्यक्ति हुन सफल भएका हुन् ।
प्रकाशित :जेठ ३१, २०७८ सोमवार - २१:०८:३४